Fampianarana Suko Ptfe Paste Extruder - SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd.
PTFE dia fantatra amin'ny anarana hoe teflon, mpanjaka plastika. PTFE mametaka extruder, milina vita amin'ny fantsona ptfe manokana izy io. Ny fantsona dia fantatra amin'ny anarana hoe capillary, tanany na fantsom-pifamoivoizana. vokatra mifanaraka amin'ny fepetra takiana. Ny lohahevitra hampiasaina, ny famaritana, ny fangaro, ny fepetra takian'ny mpampiasa ary ny anton-javatra hafa mifandraika amin'izany, amin'izao fotoana izao, dia afaka mamolavola sy mamokatra famaritana isan-karazany amin'ny milina extruder PTFE. aerospace, fitaovana mekanika, fifanakalozana hafanana ary saha hafa.
Araka ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny volavola samihafa dia misy ny mandeha ho azy sy tsotra. Ny karazana tsotra dia natao araka ny filan'ny orinasa sasany irery, ampiasaina amin'ny fanandramana, fanaraha-maso ny fanaraha-maso ny tanana, ambany ny vidin'ny fitaovana, mety amin'ny famokarana andiany kely. Fanaraha-maso mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny PLC, fikirakirana efijery, fanitsiana mandeha ho azy ny hafainganam-pandeha extrusion, fanaraha-maso ny mari-pana, fifehezana kalitao fantsona extrusion.
SUKO PTFE MACHINE TECH CO., LTD manokana amin'ny fampandrosoana, famokarana ary fivarotana fitaovana fluoroplastic, miaraka amin'ny traikefa an-taonany eo amin'ny sehatry ny fitaovana tetrafluoride, ny fitaovanay dia nanompo ny tsena iraisam-pirenena amin'ny firenena sy faritra efa ho 40. Ny mpanjifanay dia mirotsaka amin'ny sehatry ny fitsaboana, indostrian'ny aerospace, indostrian'ny tafika, indostrian'ny simika, indostrian'ny fiara ary indostria mekanika, fantsom-pitaterana sy faritra hafa, efa fantatry ny indostrian'ny fluoroplastic iraisampirenena.
Tomban'ny orinasa: fanavaozana, teknolojia, fahombiazana ary faharanitan-tsaina.
Iraka: hamorona fitaovana voalohany an'ny tetrafluoride voalohany.
1. TOKON'NY PTFE PASTE EXTRUDER
Mametaka fantsom-panazavana isan-karazany amin'ny fantsona tetrafluoride miparitaka;
Ny fametrahana vertikal dia mivoaka, afaka mamoaka 2-15 metatra isa-minitra;
Ny halavan'ny extrusion dia azo alamina mifanaraka amin'ny fepetra takiana;
Fifehezana maranitra ny fitaovana, fandidiana miorina;
Mety ny fikojakojana, malefaka ny fampitana, mora apetraka ny rafitra;
SUKO dia manome fitaovana feno, fitaovana fanampiana ilaina ary vahaolana teknika;
SUKO dia manome torolàlana ara-teknika amin'ny fizotran'ny asa;
Ny fantsom-pitaovana multi-layer dia azo esorina;
2. FAMPIANARANA TAMIN'NY TONTOLO IAINANA FITAOVANA
Rihana telo no ilaina hametrahana ireo fitaovana, hiasa amin'ny rihana fahatelo, hitandrina ny habaka fandidiana, aza avela hisy vovoka ao. Efitrano fanomanana fitaovana mialoha ny fanodinana, ampiasaina hampifangaroana akora sy additives, fanasitranana ireo akora. ny lafaoro, ny mixer ary ny sivana elektrônika. Ny tobin-tsolika dia apetraka eo amin'ny rihana faharoa ho toy ny sehatra fikojakojana.
Ho an'ireo fantsona lehibe misy savaivony ivelany mihoatra ny 50mm dia mila voahidy avy eo ambony ka hatrany ambany, 8-10 metatra eo ho eo ny haavon'ny asa io arakaraka ny takian'ny mpanjifa;
Ho an'ireo fantsona misy savaivony ivelany latsaky ny 40mm, ny halavany manontolo dia manodidina ny 13-15 metatra;
Azontsika atao ny manamboatra ny fitaovana arakaraka ny haben'ny gorodon'ny mpanjifa.
Araka ny toetra mampiavaka ny vokatra, mba hiantohana ny toetra ara-batana amin'ny fantsona tetrafluoride nipoitra, amin'izao fotoana izao ny extrusion mitsivalana iraisam-pirenena, tsy misy fitrandrahana mitsivalana.
Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny enta-mavesatra toradroa dia tokony hatramin'ny 500 kg ka hatramin'ny iray taonina, ary ny lanjan'ny fitaovana dia tokony ho roa taonina.
Ny milina fanaovana banga dia manarona faritra manodidina ny 1 metatra toradroa, ary ny extruder dia manarona faritra manodidina ny 1,5 metatra toradroa.
Fenitra herinaratra indostrialy: 380V, 50Hz, 3P, ny voltatera dia azo amboarina mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpampiasa.
Ny fitaovana tsotra dia mila asiana rivotra voafehy.
3. PARAMETER GENERAL EQUIPMENT
No. zavatra Fomba fiasa ara-teknika
Extruder PTFE fantsom-pifandraisana:
1 Halavan'ny savaivony 0,5mm - 70mm
2 Halavan'ny rindrina 0.1mm - 3mm
Masinina Extruder lehibe
2 Diameter savony 20mm-300mm
3 halava lavaka lavaka 400mm - 2000mm
4 Extruder Type Mitsangana mitsangana na miakatra karazana
5 Karazan-gazety hydraulic
6 Zintin'aratra 380V 3P 50Hz
3 Avo ambony 400mm - 2000mm
4 Karazan-gazety hydraulic
5 Extruder Type Mitsangana miakatra
2 Faritra Sinter 3
3 avo 8000-9000mm
4 hafanana 500 diplaoma
5 Zintin'aratra 380V 3P 50Hz
1 Takelaka fikirakirana Rafitra fanaraha-maso programa amin'ny efijery
Fanamarihana: Paste Extruder dia noforonina tamin'ny tsipika extruder samihafa arakaraka ny refin'ny haben'ny fantsona.
4. Torohevitra fampidirana fitaovana
5. FOMBA fiasa miasa
Hamarino raha mifanaraka tsara ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra sy ny herin'ny fitaovana, ary mifanaraka amin'ny kisary tariby ny fifandraisana misy eo amin'ny tsipika.
Zahao ny toerana misy ny solika hydraulic, jereo fa marina ny fifandraisana fantsona hydraulic. Hamafiso ny fifandraisan'ny rivotra voahidy
Hamarino raha napetraka tsara ny bobongolo ary hamafiso ny fiasan'ny tanana sy ny debugging
Aleo mandeha amin'ny alàlan'ny rafitra PLC hametraka ny tsindry, ny maripanan'ny faritra mari-pana tsirairay, ny fotoana itehirizana, ny hafainganam-pandeha ary ny masontsivana hafa
Apetraho ao anaty extruder ilay bileta teflon efa voaomana
Mijoroa ary atombohy ny milina
Ahodino na tapaho ny fantsona tetrafluoride navoakan'ny lava halavany.
Aorian'ny fampiasana dia vonoy ny masinina ary diovy ny lasitra.
6. FITAOVANA FITAOVANA SY FANAFODY
Zahao tsy tapaka ny haavony, ny fahadiovany ary ny hafanan'ny solika hydraulic
Manolo-kevitra ny hisolo ny menaka hydraulic isaky ny enim-bolana
Manolo tombo-kase raha efa tonta
Tokony hodiovina sy hotehirizina ara-potoana ny lasitra ary tokony hosaronina menaka miaro manify ny faritra amboniny
Tano moramora ny sensor ny mari-pana momba ny mari-pana ary mitahiry tsara
7. FAMARITANA NY FIASA SORATRA SY AKSORITRA
Ny ampahany ilaina amin'ny fitaovana dia alefa any amin'ny mpanjifa miaraka amin'ireo fitaovana
Ny lisitry ny ampahany lehibe amin'ny fitaovana dia alefa any amin'ny mpampiasa miaraka amin'ireo fitaovana
Rehefa mividy ny fitaovantsika ny mpanjifa, Ho fanampin'ireo kojakoja ilaina dia hanome solika ilain'ireo mpampiasa hosoloina izahay, fametrahana servisy, kojakoja azo zahana ary azo vidiana amin'ny tsena eo an-toerana
8. FOMBA FITIAVANA TECHNOLOGY
Noho ny teknolojia manokana an'ny fitaovana, azonao atao ny mandeha any amin'ny orinasa hianarana ny fametrahana, fanesorana, ny fiasan-doha, ny fanovana ny bobongolo, ny fikojakojana ary ny fitarihana ireo fitaovana maimaimpoana alohan'ny fanaterana.
Raha misy fiantraikany amin'ny elanelana, ny mpiasa, ny fotoana ary ireo antony hafa manelingelina, tsy afaka manatona ny orinasanay hianatra izahay, afaka nifanaraka izahay tamin'ny antoko hafa handamina injeniera ho tonga hitarika ny fametrahana fitaovana, debugging, fandidiana, fanovana bobongolo, fikojakojana, tari-dàlana
Afaka manome torolàlana lavitra ihany koa izahay, ary ny mpampiasa dia afaka misafidy fomba hafa toy ny telefaona, horonan-tsary, mailaka hianarana fametrahana fitaovana, debugging, fandidiana, fanovana bobongolo, fikojakojana, fitarihana, sns.
9. MOMBA NY serivisy aorian'ny famarotana
Ny vanim-potoana fiantohana ny faritra rehetra sy ny milina lehibe dia herintaona hatramin'ny datin'ny famarotana
Raha misy ny olana dia mifandraisa amin'ireo mpiasan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa hanazava ny olana amin'ny fotoana mety. Ny mpiasan'ny serivisinay dia hanaraka sy hamaha ny olana ao anatin'ny 24 ora.
Raha manana mpizara ao amin'ny orinasanay ny mpanjifa dia hiara-hiasa amin'ireo mpivarotra eo an-toerana izahay hamaha ny olana.
Raha maika ny fangatahan'ny mpanjifa dia hanome fanohanana ara-teknika horonantsary ara-potoana ny orinasanay
TEL SERVICE AFTER-SALES: + 86-0519-83999079 / +8619975113419
10. FITAOVANA SAFIDY mifandraika amin'ny hafa
Masinina tsy voatery
1 Sivana elektrika Mivaha vovoka alohan'ny fampifangaroana
2 Mixer Mampifangaro vovo-dronono miaraka amin'ny menaka manitra Liquid
3 Sinterer lavenona To sinter vovoka amin'ny menaka fanosotra
4 Destaticizer Mba hanesorana ny electrostatic amin'ny fantsona aorian'ny extruder alohan'ny hanesorana azy
5 Masinina miolakolaka Tube famaohana mandeha ho azy
6 Milina mitafo Mba hanaovana fantsona mihombo OD 8-50mm
7 Ho an'ny fitaovana tetrafluoride hafa, azafady mifandraisa amin'ny orinasanay mba hijerena hevitra